ओलीका लागि प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने उपयुक्त समय – Karnalisandesh
ओलीका लागि प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने उपयुक्त समय
प्रकाशित मितिः २३ असार २०७७, मंगलवार १७:५२ July 7, 2020
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले आन्तरिक विवादको चरम विन्दुमा छ। स्थिर सरकार र विकासका लागि जनताले नेकपालाई २०७४ को निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाएर पठाएका थिए। तर, नेकपाले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न भने सकेन।
यत्रतत्र सरकारको विरुद्धमा सुरुदेखि नै नारा लाग्न थालेका थिए। सरकार गठनपछिका करिब तीन वर्ष निक्कै विवादित र चर्चामा बिते। विभिन्न काण्डमा स्वयं प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको गैर जिम्मेवारिता प्रकट भयो। हाल आएर नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी बनेको भन्दै स्थायी किमिटीका बहुसंख्या सदस्यहरुले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबैपदबाट राजिनामाको माग गरेका छन्। यसै कारण पार्टी विभाजन हुन सक्ने आकंलन भएपछि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरेर दुई अध्यक्ष ओली-प्रचण्डबीच वार्ता चलिरहेका छन्।
स्थायी कमिटीको बैठकले बहुमतका आधारमा ओलीविरुद्ध निर्णय गर्दा पार्टी विभाजन हुने खतरा महसुस गरेका प्रचण्ड ओलीभन्दा नरम देखिएका छन्। ओली पनि यहि कुरा बुझेका कारण दुवै पदबाट राजिनामा नदिने अडानमा छन्। ओलीका उक्त अडानहरु बलिया बन्नुको एउटै कारण भनेको पार्टी एकता नै हो।
तत्तकालिन एमाले-माओवादीबीच भएको एकताले पूर्णता नपाएको बेलामा नै पार्टी फुटको नजिक पुगेको विश्लेषण हुँदा कार्यकर्ताहरु थप चिन्तित छन्। त्यति मात्रै होईन पार्टी विभाजन गर्ने काम भएको खण्डमा कार्यकर्ताहरुले नेतृत्वलाई नस्विकार्नेसमेत बताउन थालेका छन्।
नेकपाको तेस्रो तहका नेताहरु घनश्याम भुसालको नेतृत्वमा एकजुट भएर कुनै पनि हालतमा पार्टी एक राख्ने पक्षमा उभिएका छन्। भुसालले भनेका छन्, ‘सहमति बाहेकको निर्णयले पार्टीमात्र फुट्दैन, संविधान नै धरासायी हुन्छ।’ त्यस्तै प्रचण्ड निकट नेता वर्षमान पुनले आलोपालो गर्ने हो वा अन्य सहमति गर्ने हो, जे गरे पनि दुई अध्यक्षको सहमति नै पार्टी एकता जोगाउने आधार हो भनेका छन्। उनीहरुले अध्यक्ष ओली-प्रचण्डलाई एक आपसमा सहमति खोज्ने समय दिइरहेका छन्।
अर्कातर्फ नेकपाको आन्तरिक विवादमा चीनियाँ राजदुत होउ यान्छीको समेत प्रवेश भएको छ। भनिन्छ्, ‘नेकपाको विवाद समाधानमा चीन निर्णायक बन्यो।’ हुन पनि गत बैशाखमा नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न हुँदा चीनियाँ राजदुतले मिलाइ दिएकी थिइन। यसपालि पनि चीन नेकपाको आन्तरिक विवाद मिलाउन सफल हुने दाबी सुनिन थालेका छन्।
तथापी प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई दुबै पदबाट हटाउन चाहेको खण्डमा नेकपा दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ। ओली पक्षले राजनीतिक विश्लेषणका आधारमा एक पद छोड्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा प्रधानमन्त्री पद छोड्दा सबैभन्दा उत्तम हुनेछ।
त्यति मात्रै होइन ओलीले नैतिक रुपमा पनि सोच्ने बेला आएको छ। पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्री पदबाट पार्टीले नै फिर्ता बोलाउदा अनेकन बखेडा झिक्नु स्वभनिय हुँदैन। जनता र इतिहासले चर्चा गर्न लायक प्रधानमन्त्रीका रुपमा छवि बनाइसकेको नेताले पदको लागि यसरी मरिमेट्नु, आफू बाहेक अरुलाई राष्ट्रवादी नदेख्नु, पार्टी स्थायी कमिटीको दुईतिहाई सदस्यहरुको निर्णय नमान्नु जस्ता पार्टी अनुसाशन विपरित उभिनुले उनलाई पद भोगी र फण्डावाला व्यक्तिको रुपमासमेत चित्रण गर्ने माैका रहन्छ।
यसमा उनी सचेत बन्नै पर्छ। आफ्नो राजिनामाले पार्टी एक हुन्छ र सरकार स्थीर रुपमा अगाडि बढ्छ भने उनले त्याग किन नगर्ने ? हिजो कसले के गर्यो ? त्यो इतिहास हो। त्यसको समिक्षा गर्दै बस्ने ओलीलाई समय हुनुहुँदैन। ओलीले आफू के गर्न सक्छु भन्ने कुरा अहम सम्झनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने नै हो भने ओलीका लागि अहिले नै उपयुक्त समय हो भन्नेहरु उनका निकटस्थ नभएका पनि होइनन्। नयाँ नक्सा जारी गरेपछि ओलीलाई देशले राष्ट्रवादी नेताको रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। भारतसँग वार्ताको वातावरणसमेत नबेको बेला अहिले नै लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भोकचलनमा ल्याउछु भन्नु ब्यहारिक छैन।
प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर शक्तिशाली अध्यक्ष बन्दा उनको बाँकी राजनीतिक जीवन चर्चा र राष्ट्रवादी नेताको रुपमा वित्ने पक्का छ। पार्टी अध्यक्षका हैसियतले अर्को कुनै प्रधानमन्त्रीलाई ‘म भए कालापानी फिर्ता ल्याएर छोड्थे तिमीले किन नल्याएको हो ? मलाई हटाउन कति गरेका थियौ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्न पाउने मौका रहनेछ।
होइन भने उनलाई स्थायी कमिटीको बहुमत सदस्यहरुले निर्णय गरेर हटाए भने उनको छवि बन्ने छैन, भत्किने छ। ओली नै बाँकी समयका लागि प्रधानमन्त्री रहे पनि वाहवाई कमाउने काम गर्न सकिने वातावरण छैन। एकातिर कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र खस्केको छ। अर्कोतिर जनतामा सकारले काम गर्न नसकेको आवाजहरु तारन्तर उठिरहेका छन्।
आगामी दिनमा यहि सरकार होस्, या नयाँ नेतृत्वको होस् थप विवादित र बदनाम हुनेछन्। लिम्पियाधुरासहितको नक्सा छापेर भूमि फिर्ता लिने संवैधानिक सुनिश्चिता गरेपछि आफूलाई भारतीय राज्य संयन्त्रले हटाउन लागेको कुरा उनले भनिसकेका छन्। भारतीय मिडियाहरुको प्रचार पनि ओलीले दाबी गरेको जस्तै छ।
तल्लोस्तरका प्रस्तुति र नक्सा प्रकरणपछि भारतीय सत्ताले वार्ताको सम्भावना खारेज गरेकाले ओलीका तर्कहरु जनताबीचमा बिक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैमा प्रचण्डले राजीनामा भारतले होइन, आफूले मागेको बताइसकेका छन्। भारतले ओली विस्थापित भएको देख्न चाहन्छ तर, ओलीलाई विस्थापित गर्ने तागत भनेको नेकपामात्रै हो।
राजीनामा दिएपछि ओलीले विवादित बनेको यस विषयलाई जनताका बीचमा राष्ट्रवादी कोर्णबाट ब्याख्या गर्ने मौका रहनेछ। आफ्नै पार्टीका नेताहरुसमेत भारतीय डिजाइनमा लागेर पदबाट हटाउन लागेको कुरा असार १४ गते मदन भण्डारीको ६९औं जन्मजयन्तिमा बोलिसकेका छन्।
पार्टी एकता बचाउनकै लागि आफूले राजीनामा दिएको भन्ने आधार राखेरओलीले जनता र कार्यकर्तालाई आफ्नो बसमा राख्न सक्नेछन्। यसो गरेको खण्डमा उनको लोकप्रियताको ग्राप उचो हुनेछ। पार्टीभित्र उनी सबैभन्दा बलियो नेता बन्नेछन्। त्यतिमात्रै होईन आउने महाधिवेशन र चुनावमासमेत उनलाई नै कमाण्डर बन्ने मौका आउन सक्छ।
ओली-प्रचण्डको शक्ति पद केन्द्रित
पार्टी एकताका बेलामा ओली-प्रचण्डबीच भएको भनिएको भद्र सहमति गत मंसिर ४ को सहमति र त्यसपछिका गतिविधिहरुले प्रचण्ड प्रतिनिधिसभाको यसै कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्ने दाउको खोजिमा भौतारिरहेको देखिन्छन्। प्रचण्डको पहिलो र दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व काल खासै प्रभावकारी नभएको र उचित वातावरणसमेत नभएका कारण उनले काम गर्न नपाएको भन्नेहरु धेरै छन्।
पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध यति ठूलो विरोध र स्थायी कमिटीमा दुई तिहाई बहुमत जुटेको बेला प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद फुत्काउन सकेनन् भने उनी कम्जोर सावित हुनेछन्। ओली थप पावफुल नेता दरिने छन्। माधव नेपाल पक्षले अहिले ओलीलाई हटाउनका लागि प्रचण्डलाई विनासर्त साथ दिएको अवस्था छ।
प्रचण्डले यो अवस्था फेरी आउछ भन्ने कल्पनासमेत गरेका छैन। त्यहि भएर ओलीसँग नरम भएरै भए पनि प्रधानमन्त्री पद फुत्काउन लागि परिरहेका छन्। राजनीति शक्ति संघर्षको खेल भएका कारण प्रचण्डले यसरी ओलीबाट प्रधानमन्त्री पद फुत्काउन सके भने उनी नेकपाको सत्तालाई जनताको बीचमा कम ओलोचित बनाउने प्रयासमा जुट्ने देखिन्छन्। पहिलो, दोस्रो कार्यकालभन्दा यसपालि राष्ट्रिय हित र जनहितमा काम गरेर देखाउने दाउमा प्रचण्ड देखिन्छन्। तर, प्रचण्डको उक्त सपना ओलीले सहजै पूरा हुन दिने चाही देखिँदैनन्।
अन्त्यमा, प्रधामन्त्री ओली र प्रतिपक्षि दल कांग्रेसबीचको वार्ताको सन्देश सबैलाई जानकारी नै छ। ओली-प्रचण्डले पार्टीभित्रको समस्याको समाधान अरुसँग मिल्ने, आपसमा चिल्ने होईन कि आपसमा सहमति खोजेर कार्यकर्ता र देशलाई परिणाम दिनुपर्छ। ओली-प्रचण्ड पक्षले देश र जनताको भविष्यलाई ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ। नेकपा एक राखेर ओली-प्रचण्ड मिल्नुको विकल्प छैन। आजको आवश्यकता कोरोना र सहलविरुद्ध लड्ने हो, नेकपाको कहलमा रमाउने होइन।